Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina amin'ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe avy amin'ny tanan'ny macOS Mojave, hitantsika amin'ny maody maizimaizina, fomba iray izay mahatratra ny kinova desktop ho an'ny solosaina Mac, ary amin'izao fotoana izao dia toa manondro ny zava-drehetra fa izy irery ihany, satria tsy misy soritra amin'ny iOS fa mety ho avy tsy ho ela io fampiasa io, na eo aza ny tombony heverin'izy ireo fa amin'ny iPhone vaovao misy alàlan'ny efijery OLED.
Ny maody maizina vaovao an'ny macOS Mojave, tsy tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny loko dock application fotsiny izy io na avy eo amin'ny bara menio ambony, fa manarona ny interface manontolo an'ny rindran-damina, ho fanampin'ireo izay tohanan'ny fanovana farany. Ho fanampin'izany, manafina ny menus fanamboarana ihany koa izy io. Elaela i Apple nanatanteraka an'io endri-javatra io, saingy nahavita tamin'ny fomba lehibe izy io.
Raha iray amin'ireo antony hanavaozana haingana ny fitaovana mifanentana amin'ny macOS Mojave dia afaka ankafizo ity lohahevitra maizina ityAvy eo asehonay anao ny dingana rehetra hanarahana azy hahafahanao manao izany nefa tsy misy fahasarotana. Ity lohahevitra maizina ity dia mety raha matetika isika no miasa amin'ny hazavana ambany, satria manakana ny masontsika tsy ho reraka haingana kokoa, ho fitaovana tsara indrindra ankoatry ny Night Shift.
Voalohany, tsy maintsy mandeha any amin'ireo safidy fanamboarana isika Taratasy rafitra. Ity safidy ity dia misy amin'ny menio ambony voalohany eo ankavian'ny efijery ary soloina paoma.
Manaraka izany, hanokatra ny safidy fikirakirana rehetra avelan'i Apple hanova antsika izy. Mba hampiasana ny maody maizina dia tsy maintsy manindry isika General.
Voalohany, hiseho ny safidy fiseho arahin'ny safidy roa: Mazava sy maizina. Mba hampiasana ny maody maizimaizina dia mila misafidy azy fotsiny isika ary manamarina ny fomba hanovan'ny interface ny fitaovantsika ho loko tsy misy fanovana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina amin'ny macOS Mojave